Cajiib ah: Faa'iidooyinka WordPress ee Faa'iidooyinka
Plugins WordPress ayaa ah midka ugu xiisaha badan oo faa'iido leh ee filan kara webmaster ama blogger. Iyadoo loo marayo fiilo, horumariyeyaasha shabakadaha iyo naqshadeeyayaasha ayaa si sahlan ugu dari kara shaqeynta iyo isdhexgalka goobta oo ka baxsan waxyaabaha ay ku qoran tahay boggaga oo dhan. Hadday tahay inaad abuurto qaab xiriir ah oo fudud, ciyaarta video, ama spam blockers iyo naqshadayaasha content, fiilooyinka ayaa ah hab sahlan oo awood leh si loo helo waxyaabaha la qabtay.
Halkan Ross Barber, khabiir sare oo ka mid ah Semalt , ayaa ka hadlay 10 faa'iidooyinka ugu wanaagsan ee ku jira WordPress.
1 - windows rdp vps. Fiilooyinka ayaa fudud in la isticmaalo
Ku-xirnaanta WordPress waa sahlan tahay in la isticmaalo oo ay yeeshaan dhex-dhexaad macquul ah oo ka dhigaya kuwo waxtar u leh dhammaan noocyada bogagga. Waxaad si sahlan kuugu dari kartaa boggaga sawirada, sawirrada, iyo bogag internetka ah oo dhammaantood waa sahlan tahay inaad sameyso, qaadashada daqiiqado yar oo yareyso waqtiga qaabeynta.
2. Easy To Access (Accessible Access) dhammaan qalabyada
Qeybta ugu wanaagsan waa plugin WordPress oo laga heli karo qalab kasta. Wax kasta oo aad isticmaashid laptop ama smartphone, waxaad si sahlan u habayn kartaa ama u rakibi kartaa / kicin kartaa plugin iyo galitaankaaga internetka marka uu ku xiran yahay internetka
3. Looma baahna edebka HTML
Marka aad ku rakibtay plugins WordPress, uma baahnid wax xayeysiin HTML ah ama barnaamijka FTP si aad u hesho waxyaabaha la qabtay. Kaalaysyadani waxay si siman ugu wanaagsan yihiin bogagga internetka ee static iyo non-static, mana ubaahnid inaad isbedelto code-yada HTML marka aad rakibtay plugin
4. Ku haboon matoorada raadinta
The plugins WordPress waxay ku habboon yihiin makiinadaha raadinta gaar ahaan Google iyo Yahoo iyo inay kuu sahlaan inaad hagaajiso waxqabadkaaga boggaaga. Intaas waxaa dheer, boggaga, sawirada, sawirada, jaantusyada iyo sharaxaada waxaa lagu dhejiyaa 'style =' text-decoration: none none-bottom bottom: 1px solid; href = "https://semalt.com/qa/search-engine-results..htm "> natiijooyinka raadinta raadinta sababtoo ah miisaaniyaddan maadaama ay kaa caawinayaan inaad si habboon u hagaajiso goobtaada
5. Xakamee barta internetka oo isbeddelo muuqaalkeeda
Inta badan websaydhiyaadka iyo bloggers ma laha fikrad ah in plugin WordPress ay ka caawin karto inay bedelaan qaabeynta goobahooda. Waxay macnaheedu tahay in aad isticmaali kartid inta ugu badan ee suurtogalka ah ee suurtogalka ah ee shabakadaha caadiga ah iyo kuwa aan caadiga ahayn
6. Naqshado la isku habeeyey
Mid ka mid ah shuruudaha ugu muhiimsan ee dadka isticmaala maanta waa habeynta. Dhamaanteenna waxaan eegnaa meelihii naga soo horjeeda oo aan ku horumarinno goobo ballaaran. Ku-xireyaasha WordPress waxay suurtogal ka dhigeysaa suurtogalnimada iyo inoogu hawlgalaan dad badan oo isticmaala boogaha iyo boggaga internetka.
7. Diyaarso inaad isticmaasho
Waa run in google-ka laftiisu yahay shaqo adag oo aanad awoodin inaad horumariso khidadahaaga gaarka ah. Xaaladahan oo kale, si sahlan ayaad u isticmaali kartaa plugins WordPress waxayna ku bilaabi kartaa boggaaga internetka. Waxay leeyihiin awoodo kala duwan iyo shaqooyin, si ay shaqadaada u fududeeyaan oo u dhaqaan.
8. Kobcinta waxqabadka leh xulashada habboon
Maadaama ay jiraan noocyo badan oo WordPress ah, waa mid sahlan in qofku kor u qaado farsamooyinka goobta ama blog oo leh xulashada saxda ah. Waxaad ku dari kartaa inta badan ama wax yar oo ka mid ah khadadkaaga si aad ugu suurtagasho oo aad u aragto xirfad iyo ka wanaagsan sidii hore.
9. Caawimada Plugins wuxuu ku koraa ganacsigaaga
Dhab ahaantii waa run in WordPress khadka caawinta ka caawiyaan koraan ganacsigaaga. Haddii goobtaada si xirfad leh loo qorsheeyo oo ay jaangooyo, waxaa cad in dad badan oo soo booqanaya ay ku noqon doonaan macaamiisha faraxsan.
10. Suurtagalnimada dad badan oo isticmaala
Sida admin, waxaad ku dari kartaa dad badan oo isticmaala boggaaga WordPress sida aad rabto. Waxaad ku meeleyn kartaa doorar kala duwan waxayna siin karaan mas'uuliyaad kala duwan iyadoo la isticmaalayo plug-ka WordPress.